Beautiful Horn of Africa: CAAQIL, WADAAD, IYO GEEL JIRE
Saddex nin baa walaalo ahaa. Mid wuxuu ahaa caaqil, midna wadaad, ka saddexaadna geeljire. Aabbihii dhalay ayaa si lama filaan ah ifka ka tegey asagoon ka dardaarmin sidii raggani uu ka xjiaabtay ay xoolaha dhaxalka ah u qeybsan lahaayeen.
Caaqilkii ayaa wuxuu ku dooday in xoolaha loo badiyo maadaama markastoo dadka kale ay damcaan in ay qaaraan ka qaadaan uu xoolahooda difaaci jiray oo aan hal neefna laga qaadi jirin. Labadii kale ayaa ku gacan seyray.
Waddaadkii baa hadloo wuxuu ku calaacalay in tiro badan la siiyo maadaama uu weligiis xoolahaasi xirsi xir iyo xijaab la daba taagnaan jiray, Qur'aan akhriskana ay caado u aheyd. Wuu ku hungoobay codsigiisi.
Geel Jirihii ayaa wuxuu xasuusiyey labadii kale in uu asagu xoolaha ka celin jiray ugaadha sida libaaxa, shabeelka, haramcadka iyo dhurwaaga waana laga diiday.
Haddaba, maadaama lays mari waayey, ayaa caaqilkii labadii kale ku wargeliyey in ay raadshaan cid kala saarta. Wuxuu u sheegay in uu jiro nin abwaan ah oo caan ku ah garsoorka iyo xaq dhowrka.
Safar dheer ayey u kicitimeen si ay ula kulmaan ninkan ku caan baxay xaajo goynta. Goortey u tageen abwaankii, ayuu faray in uu jiro nin asaga ka abwaansan oo deggan masaafo aan sidaasi u dheereyn. Hase yeeshee, wuxuu ku wargeliyey in ay jiraan labo libaax oo dad cun ah oo hadhsada waddada ay sii mari doonaan.
Xoogaa markey sii socdeen, ayey la kulmeen labadii libaax oo heegan ku jira. Labadii libaax mid ka mid ah ayaa hadlay oo wuxuu ku yidhi raggii, "naga fakan meysaane iska soo saara midkiin sifa aynu u cunno." Caaqilkii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, ".bal noo yara kaadiya aynu tashanne oo aynu iska soo saarre kii aad cuni laheydeen."
Caaqilkii ayaa wuxuu u jeedsaday dhankii wadaadkii, wuxuuna ka codsaday in uu libaaxyada ka xijaabo. Waddaadkiina wuxuu yidhi, "xilligaan soo dhaqaajinnay illaa hadda un baan Qur'aan akhrin hayee, LIBAAXII ALAMTARA SOO DHAAF."
Kadib caaqilkii wuxuu la hadlay Geel Jirihii. Wuxuu ku yidhi, "heedhe, adiga un baa weligaa xoolaha raaci jiraye, bal si un naga dheh bahalladan oo naga celi", wuxuuna Geel Jirihii ugu jawaabay, "kuwanoo kale weligey ma aanan arag oo waa libaaxyo nooc kale ah."
Xaajadu markey halkaasi mareyso, ayuu caaqilkii wadaadkii iyo Geel Jirihii ku yidhi, "haddaan bahalladan inaga celiyo, nus dhaxalka ma qaadanayaa."? Wey aqbaleen.
Caaqilkii ayaa u tegey labadii libaax wuxuuna ku yidhi, "annagu aabbaheen boqor weeye, ee adinku, labadiinna keebaa boqor ah."?.Labadii libaax ayaa is galay oo dagaallamay. Ayagoo is rifaya, ayey si tartiib ah ka dhex xaluusheen. Abwaankii loo tegi lahaana looma baahan oo halkii ayey ka soo laabteen.
Caaqilkii ayaa kala badh qaatay dhaxalkii, labadii kalena intii soo hadhay ayey qeybsadeen.